आईफोन १२ प्रो अधिकतम मोडल संख्या A2342, A2410, A2411, A2412 - ग्याजेटहरू
एप्पलले भर्खरै यसको हाई-स्पीड घटनाको माध्यमबाट यसको नयाँ आईफोन लाइनअप सुरू गर्‍यो। अक्टुबर १ us को घटनाले हामीलाई श्रृंखलामा थप थप्यो। बजारमा त्यहाँ चार नयाँ आईफोनहरू उपलब्ध छन्। तपाईले यी दिनहरुमा बजारमा उस्तै फोनका बिभिन्न संस्करणहरू भेट्टाउन सक्नुहुन्छ। यस गाईडमा हामी आईफोन १२ प्रो अधिकतम कभर गर्दछौं। यो २०२० को प्रमुख फोन हो जुन सबै घण्टी र सिट्टीको साथ छ।
मूल्य ट्याग काफी $ १०99 to देखि १99$। सम्म हुन्छ। एप्पलको फ्लगशिप मोडेलको विश्वभरि बिभिन्न प्रकारहरू छन्। यस गाईडमा, हामी A2342, A2410, A2411, A2412 मोडेलहरूको बारेमा कुरा गर्छौं।
आईफोन १२ प्रो अधिकतम को विशेषताहरु:
आईफोन प्रो अधिकतम केहि शानदार सुविधाहरूको साथ आउँदछ। यो गुणवत्ता र तपाईंको स्मार्टफोन उपयोग को लागी सटीक ल्याउँछ। हामी उपकरणलाई हाम्रा सबै पाठकहरूलाई सिफारिस गर्दछौं जससँग बजेट छ। आईफोन १२ प्रो अधिकतम प्रयोग गर्ने उत्कृष्ट फाइदाहरू छलफल गरौं।
१. ठूलो स्क्रिन
प्रो अधिकतम एक 7. screen 'स्क्रिनको साथ आउँदछ, जुन ठूलो स्क्रिन चाहने व्यक्तिहरूको लागि उत्तम छ। योसँग तपाईंको प्रयोगको लागि धेरै संख्यामा स्क्रीन उपलब्ध छ।
२ ट्रिपल क्यामेरा सेटअप
पछाडि तीन क्यामेरा यो एक ठूलो खरीद बनाउँछ। एप्पल उपकरणहरू उनीहरूको उच्च-गुणवत्ता सेन्सरहरूको लागि परिचित छन्। तपाईं यस वेबसाइट को माध्यम बाट चित्तथरान चित्रहरु क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यसले अप्टिकल छवि स्थिरीकरण पनि ल्याउँछ। टेलिफोटो लेन्स तपाईंको प्रयोगको लागि उत्तम छ।
आईफोन लाईनअपको ठूलो थप यसको MagSafe टेक्नोलोजी हो। यो सजिलो चार्जिंगको लागि लाभदायक हो। तपाईं यस टेकको माध्यमबाट तत्काल परिणामहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
5 जी जडान
पछिल्लो G जी टेक्नोलोजी अब कुशलतापूर्वक पहुँच गर्न गइरहेको छ। एप्पल नयाँ सिम अनुभव सही गर्न को लागी काम गरीरहेको छ।
एप्पल फेरि आफ्नो प्रदर्शन मा एक कदम अगाडि गइरहेको छ। प्रयोगकर्ताहरूले सुपर रेटिना XDR प्रदर्शनमा पहुँच प्राप्त गर्न सक्दछन्। बेजेलहरू सानो छन्, र तपाईं क्रिस्टल स्पष्ट प्रदर्शनको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यहाँ उपकरणको डिजाइन मा एक समग्र सुधारिएको छ। तपाईं केहि तत्काल फाइदाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं केहि पिढि पहिले अपग्रेड गर्नुभयो। यी प्रत्येक आईफोन संस्करणमा साधारण थपहरू हुन्।
आईफोन १२ प्रो अधिकतम मोडेलहरू:
आईफोन १२ प्रो अधिक सीरियल फरक सीरियल नम्बरहरूको साथ आउँदछ। यी स्थानहरु तपाइँको पहिचान को साथ मद्दत गर्न को लागी छन्। तपाईको विशेष संसारमा तपाईको स्थानमा निर्भर संस्करण प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यी संस्करणहरू देखा पर्दा धेरै समान छन्। यन्त्रहरूको आन्तरिक संरचनामा केवल केही परिवर्तनहरू छन्। यहाँ यी आईफोनहरूको क्षेत्र-अनुसार छुट्याईएको छ।
१. आईफोन १२ प्रो अधिकतम A2342
संस्करण अमेरिका मार्केटमा मात्र बिक्रीको लागि उपलब्ध छ। प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई कुनै पनि आधिकारिक एप्पल स्टोर वा तिनीहरूको अनलाइन वेबसाइटमा खरीद गर्न सक्दछन्। यो नेटवर्किंग उत्साही को लागी सबै भन्दा राम्रो मोडेल हो।
प्रयोगकर्ताहरूले यस मोडेलको सब भन्दा छिटो G जी नेटवर्कमा पहुँच प्राप्त गर्छन्। मिमी-वेभ प्रणाली उच्च-स्पीड जडानको लागि उपयुक्त छ।प्रयोगकर्ताहरूले शारीरिक उपस्थितिमा पनि केही फरक देख्न सक्छन्। नेटवर्कको लागि एन्टेना यस उपकरणमा अधिक महत्वपूर्ण छ।
२. आईफोन १२ प्रो अधिकतम A2410
A2410 मोडेल केवल क्यानाडा र जापानको साथ प्रयोगकर्ताहरूको लागि उपलब्ध छ। दुई देशहरू उनीहरूको नागरिक सुरक्षा मापदण्डमा अद्वितीय छन्।
फोनले यस मोडेल मार्फत डुअल सिमहरू पनि समर्थन गर्दछ। यो एक ई-सिम सेवाको साथ आउँदछ। G जी क्षमताहरू पनि त्यहाँ छन्, तर यो संयुक्त राज्य अमेरिका मोडेल भन्दा फरक छ।
IPhone. आईफोन १२ प्रो अधिकतम A2411
यो संस्करण हो कि लगभग सबै दुनिया मा बेचिएको छ। यसलाई आईफोन १२ प्रो अधिकतम उपकरणको अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण भन्न सकिन्छ। १००+ भन्दा बढी देशहरूले एप्पल उपकरणको यस संस्करणमा पहुँच प्राप्त गर्नेछन्। यो A2310 संस्करणसँग धेरै मिल्दो छ।
यो डुअल सिम क्षमताहरूको साथ आउँदछ। तपाईं उपकरणमा न्यानो-सिम र ई-सिम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
IPhone. आईफोन १२ प्रो अधिकतम A2412
प्रयोगकर्ताहरूले यो संस्करण ह Hongक Kong, चीन र मकाउमा लोकप्रिय भएको देख्न सक्छन्। पूर्वी एशियाली क्षेत्रहरूमा केही अनौंठो प्रतिबन्धहरू छन्। एप्पल एक अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड हो कि सजीलै कहिँ पनि सजिलो होस्।
तिनीहरू यी क्षेत्रहरूमा अद्वितीय उपकरण प्रस्ताव गर्दछ। चीनको मुख्य भूमिमा इन्टरनेट प्रतिबन्धहरू एक दैनिक वास्तविकता हो। पश्चिमी अनुप्रयोगहरूको बहुमत प्रतिबन्धित हुनु आवश्यक छ। फोनले दुई भौतिक न्यानो सिम कार्डलाई पनि समर्थन गर्दछ।
आईफोन १२ अधिकतम प्रो को विभिन्न मोडलहरु तपाइँको सजिलो प्रयोग को लागी सही छन्। यो भर्खरको एप्पल उपकरण प्राप्त गर्न चाहने प्रयोगकर्ताहरूको लागि आवश्यक छ। हामी आशा गर्दछौं कि हाम्रो गाइडले तपाईंलाई बिभिन्न संस्करणहरूको बारेमा जानकारी दिन सक्षम भयो।
म्याकको लागि नेटफ्लिक्स अनुप्रयोग - के यो सम्भव छ?
रोबलोक्स कार्ड कोडहरू जुन काम गर्दछन्
व्हाट्सएप वेबमा कसरी कल गर्ने
नि: शुल्क फिल्महरू अनलाइन पूर्ण फिल्महरू हेर्नका लागि
कसरी तपाइँको नेटफ्लिक्स खाता रद्द गर्ने
म कहाँ अनलाइन नि: शुल्क शो हेर्न सक्छु
टिभी कार्यक्रम स्ट्रिम अनलाइन हेर्नुहोस्
साइन अप बिना फिल्म अनलाइन